होम आइसोलेसनमा बस्नु भएका संक्रमितहरुलाई अनुरोध – डा. रवीन्द्र पाण्डे « LiveMandu
होम आइसोलेसनमा बस्नु भएका संक्रमितहरुलाई अनुरोध – डा. रवीन्द्र पाण्डे
१७ बैशाख २०७८, शुक्रबार १७:५१
कोरोना संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढीरहेको छ । अस्पताल जान जोखिम मान्ने र अस्पतालमा शय्या नपाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
कोरोनाभाइरस (COVID-19) को बारेमा बालबालिकासँग कसरी कुरा गर्ने?
कस्तो अवस्थामा सेल्फ क्वारेन्टाइन बस्ने ?
परिवारका एक वा बढी सदस्य संक्रमित हुँदा के गर्ने ? यस्तो छन् केही व्यावहारिक पक्ष
कोरोनाले अक्सिजन कम हुन्छ, त्यस्तो बेला कसरी सुत्ने ?
के एस्ट्राजेनेका खोप लगाएकामा रगत जम्‍ने समस्या हुन्छ ?